ရထားဖြင့်အီတလီ Exploring များအတွက်ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > ရထားဖြင့်အီတလီ Exploring များအတွက်ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ
ရထားအီတလီမှတဆင့်ခရီးသွားလာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် မမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံကို. အီတလီနိုင်ငံရဲ့ရထားကွန်ရက်ကအီတလီမှာနီးပါးတိုင်းအဓိကမြို့ချိတ်ဆက်, ကလွယ်ကူအောင် အရပျသို့အရပျမှရရန်. မီးရထားဖွငျ့ဝိုငျးခရီးသွားလာ အီတလီနိုင်ငံကြည့်ဖို့တစ်မြန်ဆန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်လည်းအများဆုံးကမ်းလှမ်း ယင်း၏ကျေးလက်၏အံ့မခန်းအမြင်များ. ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောများမှာ ရထားအီတလီနိုင်ငံရှာဖွေစူးစမ်းများအတွက်ခရီးသွားအကြံပေးချက်များ, သောသင်တစ်သက်တာ၏ခရီးအာမခံပါလိမ့်မယ်.
အီတလီနိုင်ငံ Exploring များအတွက်ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ – အမျှအစောပိုင်းဖြစ်နိုင်ပါ့မလားအမျှဘွတ်ကင်လုပ်ရန်
အဆိုပါထိုင်ခုံနှင့်ရထားသင်ထိုင်ဖို့ရွေးချယ်ဘယ်မှာနေပါစေ, စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေကြသည်. သို့သျောလညျး, ဘယ်တော့လဲ သင့်ရဲ့လက်မှတ်ဝယ်ယူ, ကြိုးစားရန် အစောပိုင်းစာအုပ် သင်အဘို့အညာဘက်သောထိုင်ခုံရဖို့သေချာစေရန်.
Save A Train မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု (@saveatrain)
သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာပေါ်မူတည်ပြီးကျနော်တို့ရထားအီတလီနိုင်ငံရှာဖွေစူးစမ်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောခရီးသွားအကြံပေးချက်များရှိ, သင်တို့သည်ဤမျှသင့်လိုအပ်ချက်ကိုစဉ်းစားနာရီပေါင်းများစွာများအတွက်ခရီးသွားလာနိုင်. သငျသညျကိုပြတင်းပေါက်အားဖြင့်ထိုင်ဖို့ပျော်ရွှင် Are? သင်စောင့်ကြည့်အဖြစ်အချို့သောအချိန်လျှော့ပေါ့ခြင်းနှင့်ထုတ်ငေးဖြုန်း ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်း အနားမှာရှောက်သွား, သို့မဟုတ်သင်အစားအတန်းမှာထိုင်ခုံများတွင်ပါလိမ့်မယ်? သင်ပိုမိုလွတ်လပ်စွာသင့်ရဲ့ထိုင်ခုံကနေရွှေ့နိုင်သောနေရာ, သေးသေးကြီးမားတဲ့အခန်းပြတင်းပေါက်များမှအမြင်များတန်ဖိုးထား.
onboard သင်၏အချိန်အခွင့်ကောင်းကို ယူ.
သင်တို့အပေါ်မှာဖြုန်းအချိန် ရှည်လျားသောရထားစီး စည်းရုံးဖို့အခွင့်အလမ်းရှိနိုင်ပါသည်, အခြို့သောအိပ်စက်ခြင်းပေါ်တက်ဖမ်းသို့မဟုတ်သင်၏နောက် destination သည်များအတွက်အစီအစဉ်များလုပ်.
ဒါဟာသင်အမှန်တကယ်ပိတ်ထားခြင်းနှင့်ကိုယ်အဘို့အခြို့သောအချိန်ထဲကယူနိုင်သည်ကိုမကြာခဏတော့မဟုတ်ပါဘူး. သင်တစ်ဦးစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ရှိမရှိ, သင့်ရဲ့အီတလီပေါ်အလုပ်လုပ်ပါသို့မဟုတ်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ သမိုင်း နှင့်သင့်ကိုရှေးခယျြလိုရာခရီး၏က်ဘ်ဆိုက်များ, ရွေးချယ်မှုဥစ္စာ. ခရီးပျော်မွေ့နှင့်အီတလီရဲ့ယူပြတင်းပေါက်အထဲကမျက်စိစောင့်ရှောက်ဖို့မမေ့မလြော့ပါ ပါရှုခင်း.
အကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခု ဤ blog post တစ်ခုတွင်အကြံပေးချက်များ, ရထားအီတလီနိုင်ငံရှာဖွေစူးစမ်းများအတွက်ခရီးသွားဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအမှန်တကယ်ရထားခရီးသွားလာတွေ့ဆုံရန်တို့သည်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ် ဒေသခံတွေ သို့မဟုတ်တူသောစိတ်ခရီးသွားများအတွက်. သငျသညျအခြားသူများထံမှဘာတွေသင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအံ့သြဖွယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. ဒေသခံတွေသင်အကောင်းဆုံးပြောပြနိုင်-ဝှက်ထားသောကျောက်မျက် လည်ပတ်ရန်, အခြားအခရီးသွားများအတွက်မိမိတို့၏အတွေ့အကြုံများနှင့်အကြံပြုချက်များကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ်စဉ်. သင်တစ်ဦးအသံတိတ်ပေမယ့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကနေဖြတ်ပြီးထိုင်နိုင်နှင့် ဖော်ရွေသူတစ်ဦး တစ်ခုလုံးကိုများအတွက် ရထားစီးနင်း, သို့မဟုတ်သင်မေးခှနျးမေးခြင်းအားဖြင့်ရေခဲကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့. စကားပြောဆိုမှုမှပွင့်လင်း Be, သင်လေ့လာသင်ယူစေခြင်းငှါသို့မဟုတ်သင်လမ်းတစ်လျှောက်ဖြည့်ဆည်းခြင်းငှါအဘယ်သူသည်အဘယ်အရာကိုငါသိ၏ဘယ်တော့မှ.
ရထားလောကဝတ်ကိုလိုက်နာပါ – ရထားအီတလီနိုင်ငံရှာဖွေစူးစမ်းများအတွက်ခရီးသွားအကြံပေးချက်များ
ရထားအီတလီနိုင်ငံတဝိုက်ခရီးသွားလာတစ်ခုအံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံ. ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်တစ်ဦးရှိပါတယ်သေချာစေရန်ရထားပေါ်ရှိအခြားခရီးသည်များ၏လေးစားမှုဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ် သာယာသောခရီး. ဝန်ထမ်းများသည်အမြဲတမ်းဧည့်သည်များအပြီးကြည့်ရှုကြသည်သေချာနှင့်သက်သာခံစားရပါလိမ့်မယ်, သို့သော်, ကထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ရန်ရထားပေါ်တွင်လူတိုင်းတက်ဖြစ်.
သင့်ရဲ့ရထားထဲမှာဆူညံသံအဆင့်အာရုံစိုက်နှင့်ဤကပ်ဖို့ကြိုးစား. အသံကျယ်ဂီတကစားခြင်းသို့မဟုတ်တစ် footrest သကဲ့သို့သင်တို့ထံမှဖြတ်ပြီးထိုင်ခုံကို အသုံးပြု. တန်ဖိုးထားဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်. အမူအကျင့်နှင့်အခြားသူများအဘို့နှငျ့ ပတျသကျ., ဤပိုပြီးပျော်စရာသင့်ရဲ့ရထားခရီးလူတိုင်းအခြားသူရဲ့ခရီးစဉျစေမည်.
သငျသညျရထားအီတလီနိုင်ငံတွေ့ကြုံခံစားလိုနှင့်အီတလီရှာဖွေစူးစမ်းဘို့ငါတို့ခရီးသွားအကြံပေးချက်များကိုသုံးပါမလား? ကိုသွားပါ SaveATrain အွန်လိုင်း အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်ကိုပုံမှန်အတိုင်းထုတ်စစ်ဆေးနှင့်သင်၏နောက်စွန့်စားမှုစီစဉ်စတင်ရန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-tips-for-exploring-italy-by-train%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml သင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်အဆိုပါ/သားကို/က/ႏပိုပြီးဘာသာစကားများ.
ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ travelitaly traveltips